Tag: social media kuteerera | Martech Zone
Tag: social media kuteerera
Khoros inobatsira makuru mabrand orchestrate, kutonga, kushambadza, uye kuyera zvemagariro midhiya enhimbe anotyaira mhedzisiro yebhizinesi. Khoros 'Yemagariro Media Platform Inobatsira Sei Bhizinesi Rekuita kushanda - Uya nezvikwata zvako zvese, chiteshi, uye zvemukati mune imwechete nyore-kutora chikuva. Manage cross-channel social media campaigns uye real-time hurukuro mune rimwe dhibhodhi riine kugona kukuru uye kuoneka. Simudza zvemukati - Shandira pamwe, ronga, uye gadzirisa zvakanangwa zvemagariro izvo zvinokurudzira kubatana nevateereri vako. Maonero akabatana ekuita
Pamwe tinofanira kutanga nei. Dzimwe nguva tinokurukura zvemagariro enhau nevatengi, uye ivo vanoti havasi pasocial media saka havana hanya nazvo. Zvakanaka… izvo zvinosuwisa nekuti kunyangwe hazvo mhando yako isiri kutora chikamu munhaurirano dzevanhu, hazvireve kuti vatengi vako nevanotarisira vatengi havasi kutora chikamu. Nei Uchifanira Kuona Zvemagariro Midhiya Anogumbura mutengi anokurukura kwavo kushungurudzika online. Sangano redu rakange riine kusangana kwakaomarara mwedzi mishoma yapfuura